Induction pamusoro pekuomesa simbi yekugadzirisa maitiro ekushandisa
musha / Applications / Induction Kurwisa / Induction pamusoro yakaoma simbi yakakodzera
Category: Induction Kurwisa Tags: tenga induction yekuomesa muchina, kuomesa kukodzera, Kuomesa simbi kukodzera, kuomesa simbi yakakodzera Induction hita, kuomesa simbi inokodzera pamusoro, IH simbi yakakodzera, induction hardening, induction kuomesa kukodzera, induction kuomesa muchina mutengo, induction kuomesa pasi, kuomesa kwepamusoro, Pamusoro Kuomesa simbi yakakodzera
Induction Pamusoro Kuomesa simbi yakakodzera kusvika 1600 871F (XNUMX XNUMXC) yekuomesa kunyorera
Induction Pamusoro kuomesa simbi inokodzera yeyakagadzirwa zvikamu zvemugadziri inowanzoitwa neyakagadziriswa kudziya.Iyo huru technical parameter ndeyekuomarara kwepasirese, kuomarara kwemuno uye neyakaomarara kuomarara kwehuremu.
Chinyorwa: Simbi fittings (0.75 ”/ 19mm dhayamita)
Kutya: 1600 ºF (871 ºC)
Kakawanda: 368 kHz
-DW-UHF-10kW kupisa induction system yakagadzirirwa chiteshi chekupisa chiri kure chine maviri 1.0 μF ma capacitors
-A-matatu-shandura pancake helical induction yekupisa coil yakagadzirirwa uye kugadzirirwa zvakanakira ichi chishandiso
The induction heat coil design yakaita kuti chikamu chikwidziridzwe mumhepo inopisa kubva pasi. Dhizaini yacho yakaitwawo kuti ive nechokwadi chekuti ichashanda nemazvo mukati megadziriro yemutengi yazvino. Pakutanga kuyedzwa kwakaitika netembiricha-inoratidza pendi kuti iongorore kufanana kweiyo yekupisa pateni uye yekumhanyisa kumhanya. Iine yakanaka yekupisa pateni yakawanikwa, masampuli akagadziriswa panguva dzenguva dze1.0, 1.25 uye 1.5 masekondi. Iwo masampuli akadonhedzwa mukati memvura kudzima zvichitevera kupisa kuti apedze kuomesa maitiro.
Kumhanya: Kukodzera kwaipisa mukati pasi pemasekondi maviri
Kubudirira: Induction inoshandisa simba shoma pane kukwikwidza kupisa nzira
Tsoka / Dhizaini: Induction Kutya inogona kuitiswa ichitora nzvimbo ine mwero yepasi, pamwe neiyo coil dhizaini inokodzera mukati mekushanda kwevatengi
yakakwirira frequency induction kuomesa magitare simbi chikamu chikamu